Fadeexadda ka taagan Kharashkii Ergada Kulmiye ee Sanaag oo la musuqmasuqay | Berberanews.com
Home WARARKA Fadeexadda ka taagan Kharashkii Ergada Kulmiye ee Sanaag oo la musuqmasuqay
Fadeexadda ka taagan Kharashkii Ergada Kulmiye ee Sanaag oo la musuqmasuqay
Hargeysa-(Berberanews)-kharashkii loogu talligalay ergadii ka socotay Gobolka Sanaag ee ka soo qaybgashay Shirweynihii 4-aad ee Xisbiga Kulmiye ayaa gebi ahaanba la musuqmaasuqay.
Sida ay Berberanews u xaqiijiyeen xubno ka mid ah ergada oo codsaday inaan la magacaabin, ayaa sheegay in masuulliyiin ka tirsan hoggaanka Xisbiga Kulmiye ay luunsadeen dhaqaalihii yaraa ee loo qoondeeyay inay iskaga bixiyaan kharashaadka hudheellada ay deganyihiin iyo cuntadii ay isticmaalayeen intii ay joogeen.
Xubnahani waxay ku eedeeyeen labada masuul ee kala ah:, Axmed Cabdi Dheere iyo Cabdikariin Xinif inay musuqmaasuqeen oo ay ka cuneen lacagtii loogu tallogalay Ergada Gobolka Sanaag ka socotay, halka ergooyinkii gobollada kale oo dhan la siiyay kharashkooda.
xubnaha u metelelAyay Gobolka Sanaag Shirweynaha Kulmiye waxay sheegeen inaanay garanayn sababta labadaas masuul ee ka tirsan xisbigu u hungureeyeen dhaqaalihii ay iskaga bixin lahaayeen kharashaadka lagu leeyahay, islamarkaana ugu anbabixi lahaayeen gobolkii ay ka yimaadeen ee Sanaaag.
xubnuhu waxay intaas ku dareen inaanay garanayn cid ay uga cawdaan labadaas masuul oo ay ku eedeeyeen inay isku tuur tuurayaan.
Kharashaka Ergooyinka gobolada qaarkood la siiyay waxay sheegeen inuu ahaa $ 100 doolar, taas oo ay dadka gobolada bariga ee fog la yaabanaayeen. waxa la arkayay qaar ka mid ah ergooyinkii sanaag oo xafiiska xinif iyo xarunta xisbiga ku jaah wareeray, taas oo ay la yaabeen sababta ay masuuliyiinta waaweyn ee Xisbigu u samaynayaan fadeexada dheg-xumada ku ah Xisbiga KULMIYE , oo ah xisbul-xaakimkii
Previous articleMadaxweynaha Somaliland oo xadhiga ka jaray madhaariic laga hirgeliyay Borama
Next articleHoggaanku wuu tegayaa WQ M Dhimbiil